Xubno katirsan Labada Gole ee Baarlamaanka oo bogaadiyey dhalinyaro Garbahaareey ka hirgeliyey Maktabad | Somali National Television - sntv.so
Home AQALKA SARE Xubno katirsan Labada Gole ee Baarlamaanka oo bogaadiyey dhalinyaro Garbahaareey ka hirgeliyey...
Muqdisho (SNTV) Xildhibaano ka tirsan Labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa bogaadiyey dhalinyarada hirgalisay Maktabadda degmada Garbahaareey ee gobolka Gedo, kadib munaasabad ay xalay ku qabteen magaalada Muqdisho.
Senetor Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil (fartaag) oo ka mid ah mudanayaasha laga soo doorto Jubbaland ayaa tilmaamay in Maktabadaasi ay sare u qaaday heerka aqooneed ee degmada, waxaana munaasabadda shahaado sharf lagu gudoonsiiyey dhalinyarada Maktabadda hirgalisay oo qaarkood ay qurba joog yihiin.
Waxa uu sheegay Senetor Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil (fartaag) in dhalinyaradu ay door wanaagsan ka qaadan karaan horumarka dalka, islamarkaana talaabadaan ay tahay mid sare u qaadeysa waxbarashada gobolka Gedo.
Maktabadda Garbaharey oo la furay bishii Augost ee sanadkan waxa ay noqotay goob cilmi oo sare u qaaday heerka aqooneed ee Bulshada.
Previous articleHowlgal lagu dilay Maleeshiyaad ka tirsan Al-shabaab oo ka dhacay meel u dhow Degmada Jamaame
Next articleGuddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Dalka oo u ambabaxay Dalka Mareykanka